तिलोत्तमा नगरप्रमुखमा बिजयी रामकृष्ण खाँण को हुन् ? - Samatal Online
तिलोत्तमा नगरप्रमुखमा बिजयी रामकृष्ण खाँण को हुन् ?
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार Santa Kumar Shrestha0Comments
तिलोत्तमा ।बिस २०२२ साल माघ १७ गते रुपन्देहीको मणिग्राममा जन्मिएका रामकृष्ण खांण नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका हालका सभापती समेत छन् । नेता खाँणका बुवाआमा रामकृष्ण नजन्मदै बिस २०१७ सालमा स्याङ्जा बिसिङकोट ( हालको चापाकोट) बाट रुपन्देही झरेको हो ।
नेपाली काँग्रेसको राजनीति गरेपनि आम जिल्ला बासीकालागि परी आउदा साझा नेताको रुपमा सहयोगी भुमिका खेल्ने भएकाले उनी रुपन्देहीको राजनीतिक बृत्तमा चर्चित र लोकप्रिय छन् ।
उनी गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाणका सहोदर भाइ हुन । उनका पिता पनि काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । रामकृष्ण २०३५ सालदेखि नै आफ्ना बुवा र दाइको पदचाप पछ्याउँदै पञ्चायत बिरोधी आन्दोलनमा लागेका थिए ।
बिस २०४७ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको स्ववीयु इकाइको कोषाध्यक्ष भएका थिए । बिस २०५४ सालमा उनी काँग्रेस रुपन्देहीको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भए । त्यसपछि उनी बिस २०६६ सालमा जिल्ला सचिव भए ।
त्यसपछिका कार्यकाल पनि सचिव भएका उनी गत मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेस रुपन्देहीको सभापतीमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी तिलोत्तमाको मेयरमा उठेर झिनो मतले पराजित भएका थिए ।
नाम — रामकृष्ण खाण
जन्म — बि स २०२१ माघ १७ गते
बुबा — इन्द्र बहादुर खाण
आमा —टोप कुमारी खाण
स्थान —तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ८ रुपन्देही
श्रीमती — सिमा खाण
छोरा — रोहण खाण
छोरी — रुपालि खाण
दाजुहरु— हरि कृष्ण खाण,बाल कृष्ण खाण
भाई — स्याम कृष्ण खाण,
— श्री शान्ति नमुमा माध्यमिक विद्यालय मणिग्राम , बुटवल बहुमुखी क्याम्पस र त्रिभुवन विश्व विद्यालय ,काठमाडौ
उनले बुटवल बहुमुसीबा आइए र किर्तिपुर क्याम्पसबाट स्नातक सम्मको अध्ययन सकेका छन् । राजनीति,२०३५ सालदेखि पञ्चायत बिरोधी आन्दोलनमा सहभागि ,२०४० सालबाट राजनीति आरम्भ,२०३८मा मेलमिलाप दिवस मनाउने क्रममा बुटवलमा प्रहरीको धरपकडमा मात्र परेनन् केहि समय हिरासतमा बसे त्यसपछि २०४० सालको सुरजपुरा घटनामा स्वर्गीय गिरीजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरुको सुरक्षार्थ खटिएका उनी घटना लगत्तै घाइतेको उपचार तथा उद्धारमा सक्रियता पुर्वक लागे । २०४२ को सत्याग्रहका बेला अग्र मोर्चामै खटिएका उनी भाग्यबस जेल जानबाट जोगिएपनि जेल परेकाहरुको रिहाइ, खानपान, खवर आदानप्रदानको काममा सक्रिय भए । २०४६ को जनआन्दोलनमा भैरहवा उत्तरका सबै गाविसका युवाहरुको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा होमिए । २०४७ सालताका बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववीयु इकाइको कोषाध्यक्ष भए । उनी २०५४ सालमा पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भए । २०६६ मा सचिव भएका उनी जिल्लामा दुई कार्यकाल सचिव भएर कांग्रेसको संगठनलाई बलियो बनाउदै सफल नेतृत्व दिएर परि आफ्नो छवि उच्च राख्न अब्बल छन् । उनी काँग्रेसजनका माझ स्पष्ट वक्ताको रुपमा परिचीत छन ।हाल उनी नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति छन् भने भर्खरैमात्रै तिलोत्तमाको नगर प्रमुख निर्बाचित भए ।
शासक होइन,जनसेवक भएर काम गर्छ ः रामकृष्ण खांण
तिलोत्तमा,जेठ १२ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख रामकृष्ण खाँणले जनताको सेवक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
मतपरिणाम सार्वजनिक लगत्तै पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उनले आफ्ना एजेण्डालाइ मतदाताले सदर गरेकोमा धन्यबाद समेत दिए । उनले भने —हामीले अब सबैलाइ मिलाएर सबैसंग मिलेर काम गर्छाैं,तिलोत्तमालाइ देशमै उत्कृष्ट,भ्रष्टचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ,यो पुरा गर्छु ।
मलाइ आफ्नो मत दिएर जिताउनुहुने सबैप्रति कृतज्ञ छु ,मेरो अभियानमा साथ दिने सबैलाइ एकमुष्ट धन्यबाद दिन चाहन्छु ।उनले भने । शासकको रुपमा नगरपालिकामा नबस्ने भन्दै उनले जनताकै सेवामा केन्द्रित रहने र बाँकी जीवन पनि नगरबासीकै सेवा गरेर बिताउने बताए ।